BGR - -6စက်တင်ဘာလ 13 အပေါ်အခမဲ့ရောင်းဖို့က iPhone application များပေးဆောင် Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အပေးအယူ BGR - "6 စက်တင်ဘာလ 13 အပေါ်အခမဲ့ရောင်းဖို့က iPhone application များပေးဆောင်
BGR -6စက်တင်ဘာလ 13 အပေါ်အခမဲ့ရောင်းဖို့က iPhone application များပေးဆောင်
Tele RELAY တစ်ခု 14 စက်တင်ဘာလ 2019
သင်သည်သင်၏လာမည့် iPhone, iPhone, 11 11 Pro ကို၏မျှော်လင့်အတွက် download လုပ်ရန်အချို့အခမဲ့ applications များဖွင့်ရှေ့တော်၌ iPhone ပေါ်မှာသတင်းအပြည့်အဝတစ်ဦးကရှည်လျားတပတ်ကျော်ကဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျမြန်မြန်လျှင်လည်း, သင်တို့ကိုအခမဲ့ applications များအပိုဒ်အချို့ကိုဖမ်းရန်နိုင်မည်အကြောင်း မနေ့က သူတို့ကိုအနည်းဆုံးအချို့ပင်အခမဲ့ကြောင့်။
ဤဆောင်းပါးသည်၎င်းတို့၏ developer များကန့်အသတ်အချိန်များအတွက်အခမဲ့ရရှိနိုင်ကြပြီကြောင့် iPhone နှင့် iPad များအတွက်ပေးဆောင် apps များဖုံးလွှမ်း။ BGR မဆိုလျှောက်လွှာပြုစုသူနှင့်အတူဆက်နွယ်ခြင်းမရှိပါ။ သူတို့အခမဲ့ဖွစျလိမျ့မညျကိုဘယ်လိုရှည်လျားပြောပြရန်လမ်းမရှိ။ ထိုသို့သောရောင်းအားတစ်နာရီသို့မဟုတ်တစ်ပါတ်ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးလိမ့်မည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ကျနော်တို့အာမခံနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာတို့သည်ဤဆောင်းပါးကိုရေးသားခြင်း၏အချိန်မှာအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ သင်တစ်ဦး link ကို click နှိပ်ပြီးအစားကမရှိတော့အခမဲ့ "ရ" ၏နောက်လာမည့် app တစ်ခုမှဖော်ပြထားသောစျေးနှုန်းကိုကြည့်ပါလျှင်။ အဆိုပါရောင်းချမှုပြီးစီးခဲ့သည်။ သငျသညျဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လျှောက်လွှာကို download လုပ်ပါက, Apple ကသငျသညျကိုအားသွင်းပါလိမ့်မယ်။ တချို့က applications များထပ်တိုး In-app ကိုဝယ်ယူမှုရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ RSS feed မှ Subscribe သို့မဟုတ်အသုံးပြုရန် e-mail ကိုတပ်လှန့်ကို ဤအပို့စ်များကိုဖန်ဆင်းသောအခါအသိပေးကျနော်တို့ကိုဖုံးလွှမ်းပျောက်ဆုံးရောင်းအားကိုရှောင်ကြဉ်ရမည်။
Animatix - ဓာတ်ပုံ Animation ရဲ့
Animatix ဖြစ်မည် Animation နဲ့ကာတွန်းသို့သင်၏ဓါတ်ပုံများပြန်သွားလေ၏။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့အနားနှင့်အရောင်များကိုပိုမိုအသကျရှငျစေသည်နေတဲ့အပြောင်းအရွေ့ဖြည့်စွက်, သင်၏ဓါတ်ပုံများအသက်ရှူဖို့အမှန်တကယ်ကာတွန်းနည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ 24 ကာတွန်းစတိုင်များကနေရှေးခယျြပါနှင့်ကာတွန်း, ရုပ်ပြ, ပုံကြမ်းများနှင့် Animatix ၏အနုပညာများစွာထူးခြားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများထဲကတစ်ခုနှင့်သင်၏ animations တွေကိုဖန်တီးပါ။ တစ်စုံလင်ရ GIF, ဗီဒီယိုများသို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ဓါတ်ပုံများအဖြစ်သင့်ဖန်တီးမှုမျှဝေဖို့သင့်ရဲ့ရလဒ်တွေကို Adjust ။
• 24 ကွဲပြားခြားနားသောကာတွန်းစတိုင်များမှရွေးပါ
•ကွဲပြားခြားနားသောကာတွန်းများ, ကာတွန်း, ပုံကြမ်းများနှင့်အနုပညာနှင့်သင်၏ animations တွေကိုတက်ယူလာပါ။ ဆိုးကျိုးများ
•အထူးသတဲ့စုံလင်အဘို့သင့် animations တွေကို Set
•သင့် animations တွေကိုမှတိုက်ရိုက် GIF, ဗီဒီယိုများနှင့်ဓာတ်ပုံများကို Create
•စတာတွေက Facebook, Instagram ကို, တိုက်ရိုက် Share
Animatix Download - ဓာတ်ပုံ Animation ရဲ့
ပုံမှန်အားဖြင့် $ 5,99
ဘာမှစာရင်းစစ် Pro ကိုသင့်ရဲ့ iPhone, iPad အပေါ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာများကိုဖန်တီးရန်အလွယ်ကူဆုံးနှင့်အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဤလျှောက်လွှာကိုသင်တစ်ဦးရိုးရှင်းပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့ထုံးစံ၌သင်တို့၏စီမံကိန်းများစီမံခန့်ခွဲခွင့်တစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ်အသင်းများများအတွက်စံပြဖြစ်ပါတယ်။ စာရင်းစစ် Pro ကိုအတူဘာမှသင်ကသင်၏ကွန်ပျူတာအနီးမှာရှိပါတယ်သည်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်မလိုဘဲ, သင့်ဖုန်းရဲ့အဆင်ပြေထံမှ site ကိုစာရင်းစစ်စီမံနိုင်သည်။ အခုဆိုရင်သင်ရုံးအစီရင်ခံစာများ၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိဘဲသင်၏အလုပ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်ပါတယ်။
Pro ကိုသငျသညျခေါင်းစဉ်, ဖော်ပြချက်, မျိုးစုံဓါတ်ပုံများနှင့်အခမဲ့စာသားကိုနှင့်အတူပြဿနာများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ခွင့်ပြုတစ်စုံတစ်ရာစာရင်းစစ်။ သင်တို့သည်လည်းဓါတ်ပုံမှတ်စာရေးသွင်းခြင်း, ပြဿနာများကိုမီးမောင်းထိုးပြနှင့်သင့်အစီရင်ခံစာများတွင်အမှုအရာရှင်းလင်းဖို့မြှားနှင့်ပုံစံမျိုးစုံထည့်နိုင်သည်။
တစ်ခုတည်းကလစ်နှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ် PDF ကိုအစီရင်ခံစာများ ဖန်တီး. မျှဝေပါ။ အစီရင်ခံစာရဲ့ contents Customize နှင့်သင့်စာရင်းစစ်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထည့်ပါ။
• Classified ပုံများ, မြှား add, ပုံစံမျိုးစုံနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်စာသားကို
• PDF ကို format နဲ့ Create မျှဝေအစီရင်ခံစာများ  •အစီရင်ခံစာ၏စည်းကမ်းချက်များ Customize
စာရင်းစစ်တစ်စုံတစ်ရာ Pro ကို Download လုပ်ပါ
သင့်ရဲ့ iPhone အဆက်အသွယ်သို့မဟုတ်အိုင်ပက်လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ရိုးရှင်းပြီးလုပ်ရတဲ့အခမဲ့ Backup ကို!
သင်သည်သင်၏မိုဘိုင်း device ကိုမှပူးတွဲပါဖိုင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းအားဖြင့်တင်ပို့အဆက်အသွယ် restore လုပ်လို့ရပါတယ်။
backup လုပ်ထားရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်အလွယ်တကူငါ၏အအဆက်အသွယ် Save နှင့်သင့်အဆက်အသွယ် restore ။ တိုက်ရိုက်သင့် iOS device မှအဆက်အသွယ်။ သင်တို့ရှိသမျှသည်သင်၏အဆက်အသွယ်သိမ်းဆည်းခြင်းသို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီအဆက်အသွယ်ကို select နှင့် e-mail ကိုသို့မဟုတ်အခြား application ကိုထောက်ခံမှုကလိပ်စာကဒ်ကို attachment (.vcf) ပေးပို့နိုငျပါသညျ!
•သင့်အဆက်အသွယ်ကျမ်းစာရှိသမျှကို Back up
•ထပ် backup လုပ်ထားသမိုင်းနှင့်ပို့ကုန်ပြသရန်!
*** အရေးကြီး ***
backup ဖိုင်တင်ပို့ပြီးနောက်ရဲ့ inbox စစ်ဆေးနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုတင်ပို့ vCard ဖိုင်ကိုနှင့်အတူရောက်ရှိလာခဲ့သည်ဟုသေချာပါစေ။ ဖိုင်ကိုကြီးမားလွန်းခဲ့လျှင်အချို့သောဝန်ဆောင်မှုပေးတစ်ခုပူးတွဲမှု၏ပူးတွဲမှုတားဆီးနိုငျသညျ။
အကြှနျုပျ၏ဆက်သွယ်ရန်လွယ်ကူ Backup ကို Download လုပ်ပါ
သတ္တုအလေးချိန် Calculator ကို။ PRO
ဤလျှောက်လွှာကိုစစ်မှန်တဲ့ပညာရှင်များအဘို့အနေသူများကဖန်တီး! အဆိုပါရှင်းပြီသတ္တုအရှည်သို့မဟုတ်အလေးချိန်အပေါ်အခြေခံပြီးအရှည်ပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးအလေးချိန်အလျင်အမြန်, အလွယ်တကူနှင့်အငြိမ့်ကိုရှာပါ။ ရုံပရိုဖိုင်းနှင့်သတ္တု၏လူကြိုက်အများဆုံးအမျိုးအစားများ - အလွန်အကျွံဘာမျှရှိပါသည်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မဆိုတွက်ချက်မှုမှာ "အနှစ်သက်ဆုံး" အပိုင်း၌ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နိုင်ပါသည်။ ဦးစားပေးတိုင်းတာခြင်းယူနစ်ကိုရွေးချယ်ပါနှင့်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ရန်မလိုဘဲသငျသညျညီဆုံးနေ့စွဲသည့်အချိန်တွင်မဆိုတွက်ချက်မှုလုပ်ဆောင်!
- လူကြိုက်များသော Profiles
- သင့်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းများ Create
သတ္တုအလေးချိန်ဂဏန်းတွက်စက်ကို Download လုပ်ပါ။ PRO
ညဥ့်မျှော်မှန်းချက် (ဓာတ်ပုံ & ဗီဒီယို)
အဆိုပါ application ကို iPhone ပေါ်မှာမဆိုအခြားကိရိယာမပါဘဲနိမ့်ဆုံး luminosity မှာအစစ်အမှန်ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုကြာပါတယ်။ အဆိုပါခေတ်မီ algorithm ကို4နှစ်တာကာလအတွင်းဖွံ့ဖြိုးပြီးခဲ့သည် - ယခုသင်ရလဒ်တို့ကိုစစ်ကြောစီရင်နိုင်သည်! အသစ်အများဆုံး amplification mode ကို, သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံး, အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံးပြီးထူးခြားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထုတ်လုပ်သည့်ကန့်သတ်သင့်ဖုန်းကိုအပေါငျးတို့သကွန်ပျူတာနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွန်းအားပေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အဆက်မပြတ်လျှောက်လွှာအပြောင်းအလဲနဲ့ core ကို၏ပုံသဏ်ဌာပိုကောင်းအောင်နှင့်တိုးတက်စေရန်ကြိုးစားအားထုတ်လေ့ရှိ၏ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ application ကိုနှောင့်နှေးသို့မဟုတ်နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံ / ဗီဒီယိုများ၏မှတ်တမ်းတင်စဉ်အတွင်း, သင်သည် dynamically အကောငျးဆုံးရလဒ်ရရှိရန်နှင့် recoding မှတစ်ပြိုင်နက်တည်းမဆို 1-8x zoom ကိုဖြေရှင်းရန်ကင်မရာများ၏ sensitivity ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အဆိုပါ application ကိုဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုစုစည်းနှင့် Facebook, Dropbox နှင့် Twitter ပေါ်သူတို့ကိုမျှဝေဖို့၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်တိုက်ရှိတယ်။
• amplification mode ကို selector
•အစိမ်းရောင် amplification mode ကို  •လျင်မြန်စွာပြပွဲ
• LED အလင်းရောင်
•ဓာတ်ပုံ Mode ကို HD ကို
•အာရုံစိုက်အာရုံစိုက် button ကို
• Built-in စာကြည့်တိုက်
• Slider ကဗီဒီယိုဓာတ်ပုံ
•က e-mail ဖြင့်ဗီဒီယိုမျှဝေခြင်းဓာတ်ပုံများကို
• Facebook မှာဓာတ်ပုံဗီဒီယိုမျှဝေခြင်း
ည Vision ၏ (ဓာတ်ပုံ & ဗီဒီယို)  အနီရောင်အလံများ Download - စာရင်းကိုင်လိမ်လည်မှု
အနီရောင်အလံများသင်တစ်ဦးကုမ္ပဏီအတွက်စာရင်းစစ်၏အခန်းကဏ္ဍကိုကစားရန်ခွင့်ပြုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သင် "စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ" ၏တစ်ဦးစီးရီးမှတဆင့်စာရင်းကိုင်အတွက်, ရှာတွေ့မှတာဝန်ရှိဖြစ်ဖော်ထုတ်ရန်နှင့်လိမ်လည်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောကိစ္စများဖြေရှင်းရန်ဦးမည်
1 ။ အုပ်ချုပ်ရေး, အန္တရာယ်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအခြေခံမူမီးမောင်းထိုးပြ
2 ။ အလားအလာရှိသောလိမ်လည်မှုလှုပ်ရှားမှုများသတ်မှတ်ချက်နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
3 ။ အလားအလာရှိသောလိမ်လည်မှုလှုပ်ရှားမှုများ detect နှင့်ကာကွယ်တားဆီးဖို့သင့်လျော်သောထိန်းချုပ်မှုအစီအစဉ်များများအတွက်အဆိုပြုချက်ကို
အနီရောင်အလံ Download - စာရင်းကိုင်လိမ်လည်မှု
ဓာတ်ပုံအရင်းအမြစ်: App Store မှာ
တစ်ခုချင်းစီကို $ 22 အဘို့သင့်လျှပ်စစ်ဆိုင်များတွင်ဖို့ကို USB-A နှင့်ကို USB-C ကိုပေါင်းထည့်ပါ - BGR
Silver, အခမဲ့, ကြိုးမဲ့အားသွင်း $ 8, 14 $ နားကြပ်, နည်းဗျူဟာကလောင် $ 11 ပိုပြီး - BGR